Kurisa Yako 2022 Kushambadzira Kuedza neKubvuma Management | Martech Zone
2021 yanga isingafungidzike sa2020, sekuwanda kwezvinhu zvitsva zviri kunetsa vatengesi vezvitoro. Vatengesi vanozoda kuramba vakasimba uye vachipindura kune zvipingamupinyi zvekare uye zvitsva uchiedza kuita zvakawanda nezvishoma.
COVID-19 isingachinjiki yakachinja nzira iyo vanhu vanowana uye kutenga - ikozvino wedzera masimba anosanganisa eiyo Omicron musiyano, kuvhiringika kweketani uye kuchinjika manzwiro evatengi kune iyo yatove yakaoma puzzle. Vatengesi vari kutsvaga kubata pent-up kudiwa vari kuchinjika nekuchinja nguva yemashambadziro avo ekushambadzira, kuderedza bhajeti rekushambadzira nekuda kwematambudziko ekupa, kubva pakugadzira-chaicho chigadzirwa uye nekumbundikira inzwi "risina kwarakarerekera asi rine tariro".
Nekudaro, vatengesi vasati vambofunga nezve kusundira kutumira kune yavo inotevera email kana mameseji mishandirapamwe, ivo vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti vari kutevedzera akanakisa maitiro mukutaurirana kwevatengi uye nemvumo manejimendi.
Chii chinonzi Consent Management?
Kutonga kwemvumo ndiyo nzira inoshandiswa kuita otomatiki tsika yako yekuunganidza mvumo, zvichiita kuti zvive nyore kuvaka kuvimba, kukurudzira vatengi kuti vasarudze kupinda uye kuchengetedza kutevedzera zvirevo zvemvumo.
Sei Kutonga Kwemvumo Kwakakosha?
A mvumo manejimendi manejimendi (CMP) chishandiso chinovimbisa kutevedza kwekambani nemitemo yakakodzera yemvumo yekutaurirana, senge GDPR uye TCPA. A CMP chishandiso makambani kana vaparidzi vanogona kushandisa kuunganidza mvumo yevatengi. Inobatsirawo nekugadzirisa iyo data uye kuigovera nemavara uye email vanopa masevhisi. Yewebhusaiti ine zviuru zvevashanyi vemazuva ese kana kambani inotumira makumi ezviuru emaemail kana mameseji pamwedzi, uchishandisa CMP inorerutsa kuunganidza zvibvumirano nekuita otomatiki maitiro. Izvi zvinoita kuti ive nzira inoshanda uye inodhura yekuramba uchitevedzera uye inobatsira kuchengetedza mitsetse yekukurukurirana yakavhurika.
Zvakanyanya kukosha kuti vatengesi vashande nevanovimbwa navo vanoshanda mumhinduro dzekutonga kwemvumo, kunyanya kuvaka nekusimudzira chikuva chinotarisisa mutemo wenzvimbo dzese dzakakodzera, kusanganisira United States, Canada, EU nezvimwe. Kuve nehurongwa hwakadai munzvimbo kunoderedza njodzi yekutyora mitemo yedata yechero nyika kana hutongi umo kambani yako ine tarisiro nevatengi. Mapuratifomu emazuva ano epamberi akavakwa nekutevedzera-ne-dhizaini, kuve nechokwadi chekuti sezvo mirau inoshanduka uye nekushanduka, ndizvo zvinoitawo kutevedza kwemvumo yekutonga kwechiratidzo.
Kutonga kwakakodzera kwemvumo kwakakosha zvakare kupihwa shanduko kubva kune wechitatu-bato cookie data kushandiswa uye kuunganidza yekutanga-bato data zvakananga kubva kune vatengi.
Kuenda Kure kubva kune Yechitatu-Bato Data
Pave paine hondo irikurwiwa kwenguva yakati zvino pamusoro pekodzero yemunhu yekuvanzika kwedata. Kupfuurirazve, pane kuvanzika/munhu gangaidzo riripo. Izvi zvinoreva kuti vatengi vanoda kuvanzika kwedata uye kuziva kuti data ravo rakachengeteka. Nekudaro, panguva imwecheteyo, isu tinorarama munyika yedhijitari uye vanhu vazhinji vanonzwa kuremerwa nese meseji inouya kwavari zuva nezuva. Naizvozvo, ivo vanodawo kuti mameseji ave emunhu uye akakodzera uye ane tarisiro yekuti mabhizinesi achapa zviitiko zvakakura zvevatengi kwavari.
Nekuda kweizvozvo, pave neshanduko yakakosha munzira iyo makambani anounganidza nekushandisa data remunhu. Makambani nevashambadziri zvino vakatarisana nekugashira kuunganidzwa kwedata rekutanga. Iyi fomu yedata ruzivo rwemutengi zvakasununguka uye nemaune kugovera nemhando yavanovimba nayo. Inogona kusanganisira maonero emunhu sezvido, mhinduro, ruzivo rweprofile, zvaunofarira, mvumo, uye chinangwa chekutenga.
Sezvo makambani anochengetedza chimiro chekujeka pamusoro pekuti sei vari kuunganidza rudzi urwu rwe data uye vachipa vatengi kukosha mukudzoka kwekugovana data ravo, vanowana kuvimba kwakanyanya kubva kune vatengi vavo. Izvi zvinowedzera kuda kwavo kugovana data rakawanda uye kusarudza-kupinda mukugamuchira kwakakodzera kutaurirana kubva kumhando.
Imwe nzira iyo makambani ari kuwedzera kuvimbana nevatengi ndeyekuvachengeta vachigadziridzwa nekupa uye zvinyorwa zvekuvandudza pane zvigadzirwa zvavanofarira kutenga. Iyi nhaurirano yakajeka pamusoro pezvigadziriso zvekutumira inobatsira kubata zvinotarisirwa pakutakura, kana kunonoka mukutakura.
Kuronga 2022 Kushambadzira Kubudirira
Kutarisa pane aya mazano kwakakosha kwete chete kubata kutenderera kwekutenga nguva zhinji, asiwo mukuronga 2022 kushambadzira mashandiro uye mar-tech kuwedzera. Chikamu chechina kazhinji inguva iyo mhando dzinosangana nezvikwata zvavo zvekushambadzira kuona kuti kutaurirana kuri munzira uye kuona nzira dzegore rinouya dzekuvandudza ruzivo rwevatengi, kuwedzera mari uye kuchengetedza mitsara yekutaurirana yakavhurika.
Nekutora matanho aya muaccount, iwe nemhando yako mune chokwadi chekuve nhanho pamberi pemakwikwi ekutanga kwa2022!
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve PossibleNOW's mvumo manejimendi manejimendi:
Kumbira PossibleNOW Demo
Tags: CMPmanejimendi manejimendimvumo manejimendi manejimendimvumo maneja softwarekuvanzika kwevatengiCookiesyekutanga-pati makukizvinogoneka manjemitemozero-party cookies